Ịnata ọrụ na 2018 Dubai City Company na UAE 🥇
Ịnakọta ọrụ maka 2018 Dubai City
Kedu ihe kpatara Dubai ji bụrụ ebe kachasị mma maka ọrụ?
Na-ewebata ọrụ na 2018 Dubai City, Dubai City Company ugbu a na-anakọta ọtụtụ ohere na UAE. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Dubai. Wepụ CV na ụlọ ọrụ anyị ma nweta ọrụ ọhụrụ na ohere na United Arab Emirates. Ndị otu anyị na - enyere ndị India na - achọ ọrụ na ndị Pakistan si mba ọzọ aka. Ebumnuche anyị bụ inyere ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ aka site na ahịa zuru ụwa ọnụ nweta oru na UAE.
Anyị na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka chọta ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị ndị ọkachamara na-enyere ndị na-achọ ọrụ n'aka gburugburu ụwa. Dika odi, ndi otu ndi n’oru n’uche anyi na elebara anya na ebe ndi oru mgbasa ozi iji nyere gi aka inweta oru. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nlekọta mba ụwa. Citylọ ọrụ Dubai City bụ ihe na-agbanwe egwuregwu n’inyocha ọrụ gị.
Enwere ọtụtụ ebe na Dubai ebe ị nwere ike inweta ọrụ. Emirates Ndị na-achụ nta ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta ọrụ mpaghara. Dubai City Company ugbu a na-enyere ndị mba ọzọ aka na USA. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike ịchọta ọrụ n'ahịa ahịa ụwa. Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị bụ isi ihe na nyocha ọrụ gị.
Ịbanye na Dubai
N'otu oge ahụ, anyị nwere ike ịnyere gị aka na nhọrọ ole na ole ndị ọzọ. Dị ka ibugote malitegharịa na Ụlọ ọrụ Dubai. Ijikọ ndị na-ewe ihe na UAE. Ọzọkwa, kwalite profaịlụ gị na UAE. N'aka nke ọzọ na ọrụ anyị, ị nwere ike mfe chọta ọrụ ọhụrụ na mba GCC. Maka ebumnuche nke ndị ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Nwere ike ijikọ ya na ndị njikwa HR na Dubai. Igosi gi uzo iwere ndi isi n ’ulo oru n’AAE. N'ezie, ihe ị ga-eme na UAE.
Ndị ọbịa anyị si mba ndị ọzọ dịka India, Pakistan, South Africa, na Filipines. Jiri ịhụnanya na-ahụ anyị n'anya Ahịa ọrụ Dubai Dubai. N'ihi na ndị isi ọrụ ọhụrụ na-ekenye ọrụ nwere mmasị na-enye na otu anyị. Ndi ohuru ohuru na-eziga ha malitegharia ndị nwere ike ịrụ ọrụ na Dubai. Na-anata ndetu ọrụ ya na ezigbo arịrịọ. Ma n'ezie na na kwaga na Emirate.
Anyị na-eduga ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ na Dubai. Ndị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ na Dubai nke ndị ọrụ anyị nyere na-aghọ a maara nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta. Ihe akaebe kacha egosi na anyị na-enye ọrụ dị mfe. Anyị na ndị na-etinye ego ruo ụbọchị 60 na UAE. N'agbanyeghi ebe i si bia na ebe i choro inweta. Anyị nọ ebe a enyere gị aka inweta ọrụ ịchọta ọrụ. Ịnakọta ọrụ maka 2018 Dubai City bụ ihe nzukọ anyị kachasị mma.
Zipu CV maka ọrụ na Dubai
Njikwa mbanye na Dubai maara nke ọma maka ndị isi obodo. Puttọ ya n'ụzọ ọzọ, site na iji ọrụ anyị. Can nwere ike sonyere ụfọdụ ụwa ụlọ ọrụ mara ọkwa kachasị mma. N'ikwu okwu n'ozuzu, ị nwere ike jikọọ na ndị ọrụ gọọmenti na-achọ ndị ọrụ. Ihe ọzọ dị mkpa na ọrụ anyị bụ ụdị na ụlọ ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ọrụ ụlọ ọrụ anyị nwere nke doro anya maka ndị ọpụpụ. Anyị na-anakọta maka ọrụ na 2018 Dubai City.
Na njedebe ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nhazi ọrụ ụwa. Ị nwere ike nweta nke ahụ site n'aka ndị ọkachamara na-eme njem na Dubai City Company. Ịchọta ọrụ bụ ihe kasị mma nke nwere ike ime ndị ọ bụla na-achọ ọrụ n'ụwa. Citylọ ọrụ Dubai City bụ mba raara onwe ya nye ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ na Emirates. Nyere isi ihe ndia, Eshia Eshia na Western na-achọkarị ohere kachasị mma na Dubai. Ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-achọ ndị ọhụụ.
Ugbu a, ha nwere ike ịrụ ọrụ na nzukọ anyị. Ohere inweta ọrụ na mba GCC bụ ndị kasị mma maka ndị ọkachamara. I nwekwara ike ịmalite ịrụ ọrụ na ha. Chọta ọrụ ọhụrụ gị na Middle East. Meekwa ka uche gị maka ohere ọrụ na ụlọ ọrụ anyị.
Ọrụ Nchọgharị Job na UAE
Gịnị kpatara ụfọdụ ndị na-achọ ọrụ nweta mgbe niile ọrụ ha chọrọ?
N'ihi na ha bụ Na-ebugote Mbido anyị na-enyocha ha!
Gịnị mere eji eji ụlọ ahịa Dubai City?
Na njedebe ikpeazụ, Ụlọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị 8 afọ ahụmahụ.
Dị ka egosiri n'elu, anyị na-anakọta maka Mba Middle East na mba GCC.
Nyere isi ihe ndia, ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-eduga mba na mpaghara ụlọ ọrụ na Dubai.
Maka ọtụtụ akụkụ, ìgwè anyị maara ihe Dubai òtù dị iche iche na-achọ ọrụ gị.
Ruo oge ugbu a, anyị na-enye klas mbụ mara mma, ọkachamara ngwa ngwa ọrụ maka ndị ọgbọ si India na Pakistan.
Anyị na-arụ ọrụ na Ụlọ ọrụ nchịkọta UAE & nwee ọtụtụ narị ndị ahịa kachasị mma sitere na mba GCC dị na Saudi Arabia, Bahrain, na Ijipt.
Na nti akụkụ recru recruite na UAE. Ohaneze mara ka otu esi ele ọrụ anya kwesiri ịdị. Naanị rụpụta nsonaazụ kacha mma na mpaghara UAE.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, anyị a raara ụlọ ọrụ nye akwụkwọ ọrụ gị. Onye nyocha nke onwe ya na - achọgharị ngwa ngwa ọhụrụ.
N'eziokwu, ụlọ ọrụ Dubai City Company ejirila 480,000 rụọ ọrụ na-etinye ndị mmeri maka ọrụ ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu, ịchọ ọrụ ọhụrụ na UAE na-ewe oge. Anyị ga enyere gị aka iji nyocha.
Na oge nyocha maka ọrụ ọhụrụ na Middle East a ga-ebelata ya na ụbọchị 60.
Site n'otu aka ahụ, ibu ọrụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma bụ isi. Anyị na-enye ọrụ ọrụ ọrụ.
Na n'elu nke ahụ, ị ​​ga-adị mgbe niile chọta Job na Dubai. Site n'ịchụpụta mba na enyemaka ọrụ.
Ịnakọta ọrụ maka 2018 Dubai City !.
Ụlọ ọrụ Dubai City bụ azụmahịa na-arụ ọrụ nke ọma
Anyị na-enye ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa
Inyere ndi otu mba na ndi choro oru choro aka
Inweta oru n'ofe Middle East
Ịchọta ọrụ na Dubai
Dịka eziokwu, anyị na-enye 2 igodo ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ. Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ndị ọrụ ọrụ maka ndị si mba ofesi na Dubai. Yana ọrụ mmadụ na-ahụ maka ọrụ nyocha na UAE. Yana ọrụ ịnabata ọrụ. Ọ dịkwa mkpa na ụlọ ọrụ anyị na-enye ndị isi ọrụ nyocha maka ndị na-achọ ọrụ Indian. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu mana karịa karịa 50 pasent nke anyị ndị na-achọ ọrụ si India na ahịa ahịa Dubai.
N'aka nke ọzọ, nzukọ anyị nwere ìgwè nke ndị na-ewebatara onwe ha. Ndị otu anyị na-agba ọsọ maka ndị isi ụlọ ọrụ 5 Arabic. Anyị nabatara ebe ọdịda anyanwụ na Qatar na Egypt na Ndị odeakwụkwọ South Africa. Companylọ ọrụ anyị na-anwa inyere ndị ga-achọ ọrụ aka ọrụ n'ụwa niile aka. Rugba akwụkwọ maka ọrụ na 2018 Dubai City dịnụ maka gị.
Anyị na-ejikwa ezigbo ego mbanye Ndị ndụmọdụ na Pọtụfoliyo ndị isi na Dubai City. Maka ebumnuche nke enyere ndị na-achọ ọrụ n'aka Philipine. Ọzọkwa, na-enyere ha aka ịrụ ọrụ na Middle East. Anyị na-achọ ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ nchịkọta kachasị na ndị ọrụ nyocha na Dubai. Ụlọ ọrụ kachasị mma, iji nweta ọrụ na Dubai na malite ịbanye na Dubai. Oké Osimiri Na-ahụ Maka Oké Osimiri. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
2018 - 2019 na ịchọ ọrụ na UAE
Ọtụtụ n'ime ndị na-eche echiche esi achọta International Career na Hotel Management UAE. N'ihi na nke a bụ ụzọ kachasị mfe ịchọta ọrụ na Dubai. Karịsịa maka ụmụ nwanyị ndị na-achọta ihe na-achọ ọrụ na 2018 na 2019. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ kacha sie ike nweta ọrụ bụ Google na Dubai. N'ezie, ị nwere ike ịchọ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ.
Ọ na-ebili ahịa maka ndị na-achọ ọrụ bụ ekwentị mkpanaaka ụlọ ọrụ. Nwere ike ịchọ ọtụtụ ụlọ ọrụ na Dubai bụ ndị na-arụ ọrụ na UAE. Yabụ enwere ọtụtụ ohere maka expats na Dubai. Dika eziokwu nke otutu ndi na acho oru na-aga Dubai. Yabụ, ka anyị kwuo na anyị tinyere ya n'ụzọ amamihe wee nwaa chọta ọrụ na Abu Dhabi.
Ọtụtụ n'ime Ndị India na-achọ ọrụ na-eti isi obodo UAE. Mana enwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta ohere ọrụ na UAE. Enwere ọtụtụ ihe na-ebili na United Arab Emirates maka ndị na-achọ ọrụ dịka ọmụmaatụ ọrụ ego na UAE. N'iburu nke a n'uche, anyị na-achịkọta ụfọdụ nyocha mpaghara. Anyị na ọkachamara mbanye mbanye anya anya ohere ulo oru ego. O doro anya na ha adịghị mfe ịchọta ma na ọ dịghịdị mma ịkwụsị usoro ịgba ajụjụ ahụ.
Ma ị ghaghị ịgba mbọ chọta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ na Dubai. N'afọ ndị sochirinụ, Gọọmenti nke UAE na-ebili ọtọ na Dubai na Abu Dhabi. N'iburu nke a n'uche jide n'aka na ị dị njikere maka ahụmahụ gị.
Pakistani Expats na Dubai
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na Emirates. Ịgafe si India, South Africa, Filipines na mba ndị ọzọ GCC. Ha niile achọ ọrụ nrọ na Dubai. Anyị na-elekwasị anya na ike nyere ndi oru choro Pakistan aka ka ha tinye ya na Dubai. Ya mere, ọ bụrụ na ị si Pakistan, anyị ga-enyere gị aka itinye na UAE. I kwesịkwara ịtụle dị ka Pakistani ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Saudi Arabia. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai maka ọrụ na Saudi Arabia.
Ọtụtụ ndị si mba ọzọ na-anwa ịmalite ọrụ ọhụrụ na UAE. I nwekwara ike ịbụ otu n’ime ha. Enwere nnukwu ohere na ụlọ ọrụ anyị ga-etinye gị n'ọnọdụ ọhụrụ n'ime ụbọchị 60. Mana enwere ụfọdụ ihe dị iche na nke ahụ. Ọ bụghị onye ọ bụla na-enweta ọrụ na UAE. Statistically over 65% ọrụ ịchụ nta ndị ọbịa na Dubai. Notghara inweta oru. Naanị imefu ego na njem gaa UAE. Na njedebe achọtaghị ohere ọrụ ọ bụla.
Companylọ ọrụ anyị na-enye ndụmọdụ maka ọrụ ọhụụ ọbịa na Emirates. Icho ihe banyere oru ndi di ala. Iji maa atụ, inwere ike ịchọta ọrụ dịka ọrụ bụ isi azụmahịa ụgbọ ala na Dubai. Ebe ọ bụ na ị kwagara Dubai. Ịkwesighi ịghọ CEO n'ime izu. Ị ga chọta ezigbo ohere mgbe ị na-ebi na Emirates.
Na-arụ ọrụ dị ka Expatriates Dubai
Eleghi anya ị na-eche ugbu a ka ọ dị bụrụ onye na-abanye na UAE. Enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị ọrụ ụwa. Karịsịa na ahụmahụ zuru oke. Otu n'ime ihe atụ nke ọrụ nnukwu ụgwọ a bụ onye nkụzi. Nwere ike ịnweta ego maka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ekwu okwu Bekee. I nwere ike ịkụziri ndị ọzọ otu esi ekwu na ede. Ọ dị ka echiche nzuzu mana ọ na-arụ ọrụ ọfụma.
The Ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ na UAE maara nke ọma na ebe nrụọrụ weebụ. Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ dị ka onye ọpụpụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ndị ọbịa ọhụrụ na Emirates. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ akwụ ụgwọ dị elu. Kpamkpam, Dubai ya na Abu Dhabi bụụrụ gị ebe. Anyị na kwenyesiri ike na njem ọ bụla ga - enwe obi ụtọ na United Arab Emirates. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị si Asia ma ọ bụ Europe.
N'eziokwu, UAE Gọọmenti meghere ọnụ ụzọ maka ọnọdụ ọrụ maka ndị mba ọzọ. Karịsịa maka ihe omume ọhụrụ dịka blockchain technology na Expo 2020. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na ịkwaga na Emirates nwere ike ịbụ mkpebi kachasị mma maka onye ọ bụla. E nwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai. A na-etinye ndị ọhụụ ọhụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nwere anya anyị WhatsApp ọrụ maka expats. Ị nwere ike ịdenye ekwentị gị ajụjụ ọnụ n'elu skype ma ọ bụ WhatsApp. Mgbe ahụ kwaga ya Dubai City. Anyị na Recruiting maka ọrụ na 2018 Dubai City.
Ịnakọta ọrụ na 2018 Dubai City!
Ịnabata maka ohere ọrụ na UAE